हचुवाका भरमा सबैलाई शहीद घोषणा गर्ने प्रचलनले सच्चा शहीदप्रति अपमानः प्रमुख शाक्य
माघ १३, २०७४ BNNTV
काठमाडौँ । शहीद सप्ताहको दोस्रो दिन आज काठमाडौँ महानगरपालिकाले धर्मभक्त माथेमाप्रति श्रद्धाञ्जलिको कार्यक्रम गरेको छ ।
आजकै दिन धर्मभक्त माथेमाले अमरत्व प्राप्त गर्नुभएको काठमाडौं सिफल उकालोमा आयोजना गरिएको श्रद्धाञ्जलि सभाको आयोजना गरिएको छ । सो अवसरमा कामपाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले शहीदको सपना पूरा गर्न अब सामाजिक र विकासका आन्दोलनमा सक्रिय हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
सो अवसरमा महानगरको वडा नं ७ का वडाध्यक्ष शुद्धकुमार डंगालले, पदीय दायित्वबमोजिमको जिम्मेवारीले मात्र शहीदको सपना पूरा हुनेमा जोड दिनुभयो । तत्कालीन राणाशासनको सरकारले धर्मभक्त माथेम १९९७ साल माघ १३ गते काठमाडौँको सिफलमा रहेको बकाइनोको रुखमा झुण्ड्याइएको थियो ।
विसं १९६६ आश्विन १ गते काठमाडौँको ओमबहालमा जन्मनुभएका माथेमालाई तत्कालीन शासकको विरुद्धमा गतिविधि सञ्चालन गरेको आरोप लगाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो ।
प्रकाशित : शनिबार, माघ १३, २०७४१९:१६
वाम एकता तयारीसँगै प्रगतिशील लेखकमा वैचारिक धु्रवीकरण
टीकापुर घटनाका फरार अभियुक्त रेशमलाल चौधरीले गरे अदालतमा आत्मसमर्पण
चट्याङ लागेर खोटाङमा दुईको मृत्यु, एक घाइते!
१० तस्विरमा हेर्नुस निर्मलाको लागि न्यायको माग गर्दै माइतीघमा विशाल र्याली प्रदर्शन!
धनेश्वर क्षेत्रको विकासमा लाग्न राज्यमन्त्री थरुनीको आग्रह